Xildhibaanimadu xalaal iyo xoog midna kuma xuma!! | Maanta Online
Home / Faallo / Xildhibaanimadu xalaal iyo xoog midna kuma xuma!!
Posted by: admin in Faallo December 25, 2016	Comments Off on Xildhibaanimadu xalaal iyo xoog midna kuma xuma!! 958 Views
Soomaaliya sida badan waxaa la cabsiiyay suntii qabyaaladda, Nebi Muxamada ( SCW ) wuxuu yiri qabyaaladda ka taga waa Qurune. Abwaankii Soomaaliyeed marxuum Cabdulqaadir Xirsi Yamyan wuxuu yiri, Qabiil waa laba erey oo is cuneysa oo kala ah; Qab oo macnaheedu yahay Kibir iyo iil oo macnahdeedu yahay Qabri.
Previous: Mid ka mid ah ganacsatada ugu magaca dheer Soomaaliya oo isku sharxay xilka Madaxweynaha + Sawirro
Next: Int’l community gravely concerned over decisions of National leadership Forum on Electoral Process